Zatia Rocher: ilay bandy nanapaka ny filahiany ary namboly nono amam-body - Vaovao farany
Home / lehilahy / sarim-bavy / vatokolonjo / vehivavy / Zatia Rocher / Zatia Rocher: ilay bandy nanapaka ny filahiany ary namboly nono amam-body
Niteraka resabe ny fisehoan'ity mpanompon'Andriamanitra ity tamin'ny fahitalavitra iray vao tsy ela akory izay, i Zatia Rocher no anarany. Tsy pasitera, tsy môpera, tsy eveka, tsy apôstôly ary tsy mpaka ampahafolon-karena akory i Zatia Rocher, na miantso tsy tapaka ny anaran'Andriamanitra aza izy... fa bandikely nanapaka ny filahiany, nampivonto ny fitombenany ary namboly nono teo an-tratrany.
"Bevohoka ahy ny reniko, sipakely no hita tao anaty echographie, nefa rehefa niporitsaka aho dia miracle fa nivadika bandikely..." hoy izy nanoloana ny mpanao gazety izay hita fa tena liana tokoa mihaino ity sipabandy ity. "Efa mavokely avokoa ny akanjo sy fitaovana nomanina ho ahy, kamo be i mamanay hividy zavatra miloko manga ka ireny no nampanaoviny ahy" hoy indray izy niezaka nanamarina ny safidiny, sy nanampy hoe: "Vehivavy gadra tao anaty vatan-dehilahy aho, vavy daholo no nanaovan'Andriamanitra ahy ankoatry ny vatako."
Sipakely arak'izany no nahitana azy tao an-kibo ka misaotra an'Andriamanitra izy amin'izao fiverenany ho sipakely izao. Ny reniny sy ny fianakaviany koa moa dia efa nitaiza azy am-pahamendrehana sy nanao tongotra miara milanja sy soroka miara mamindra taminy hahatontosa izao fivadihany no sipa izao.
Ankoatra azy sy ny fianakaviany dia betsaka no milaza fa tsara tarehy sy tsara bika be i Zatia, izany hakantony izany dia hoentiny hanampiana ireo zaza sahirana, hanokafany fikambanam-behivavy hanampy ireo sahirana.
Na izany na tsy izany dia mbola betsaka foana ny mpitsikera azy, toa itony hita ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook itony :
Efa tonga aloha ny valinteny atolotr'i Zatia ireo mpitsikera: "Tsy ahoako..."
Araky ny fanazavàny, ny hoe Zatia Rocher dia midika hoe "izaho tia vatokolonjo". Jereo anie ireto sariny ireto e:
Tao ny tsara tapaka, tao ny tsara voly.
Vehivavy tsara bika ny tovolahy
"Tsy tia lehilahy ilay bandy miaraka amiko, dia nivadika vehivavy ho azy aho..." hoy Zatia.
Vakio koa : Lehilahy gasy, tsy nandalo fandidiana, mbola lehilahy tanteraka
Zatia Rocher: ilay bandy nanapaka ny filahiany ary namboly nono amam-body Reviewed on août 28, 2016 Rating: 5
lehilahy X sarim-bavy X vatokolonjo X vehivavy X Zatia Rocher